+ Uxolo + Ukungabi nabundlobongela -Izixhobo zeNyukliya-kwihlabathi liphela
Ikhaya » Izaziso » Amanqaku eenkcukacha » + Uxolo + Ukungabi nabundlobongela -Izixhobo zeNyukliya
En esta campaña “+ Uxolo + Ukungabi nabundlobongela -Izixhobo zeNyukliya” se trata de aprovechar los días entre el Día Internacional de la Paz y el Día de la Noviolencia para generar acciones, sumar activistas y avales.
Ifomathi yeli phulo ayizukujongana nemicimbi yobuso ngobuso, eqhutywa kwinethiwekhi yoluntu (i-Facebook, i-Whatsapp, i-Instagram, i-YouTube, iTelegram, i-imeyile, iTik-Tok).
Umbono ukubandakanya hayi kuphela amalungu e-World Ngaphandle kweemfazwe okanye i-World Matshi, kodwa neminye imibutho.
Ixesha lokuqhuba kweli phulo lizoqala nge-18 Septemba ukuya kwi-4 ka-Okthobha. Iintsuku ezili-17 zemisebenzi.
Kuyacetyiswa ukuba yonke imisebenzi iqale okanye iphele ngomzuzu omnye wokuthula okanye umsitho omfutshane nguJulio Pineda, itshantliziyo noMundo sin Guerras y sin Violencia waseHonduras owangcungcuthekiswa kwaye wabulawa ekuqaleni kukaSeptemba.
Iintlanganiso zoququzelelo kwi-ZOOM: Amalungu eWWW avela kumazwe ali-16 athathe inxaxheba: iArgentina, iColombia, iCosta Rica, iChile, iSpain, iFrance, iGuatemala, iHonduras, i-Itali, iMorocco, iMexico, iPanama, iParaguay, iPeru, iNigeria neSuriname.
Iintshukumo ezenziwa kwinqanaba lamazwe aphesheya
Imisebenzi eyonyuselwe kwilizwe iyasetyenziswa, enje nge Usuku lwehlabathi loxolo ukwenza iintshukumo ezahlukeneyo:
Umntu okanye isenzo sesikolo sedijithali ngoXolo kunye noNgcoliseko njengale:
Isonge i-origami crane yoxolo, imiboniso yemizobo yabantwana e-Ecuador, eJapan nakwizikolo zaseColombia, eGuatemala okanye kwezinye.
100 imizuzwana ukuya ezinzulwini zobusuku. I-Atomic Clock evela kwiBulletin yeeNzululwazi zeAtomic
Inkxaso yezixeko TPNW: Umnxeba koomasipala baseChile naseSpain ukuxhasa i-TPNW. Ngaphezulu kweedolophu ezingama-200 kumazwe ali-16 axhasa i-TPNW. https://cities.icanw.org/list_of_cities
Nge-26 kaSeptemba, uSuku lwaMazwe ngaMazwe lokuPheliswa kwezixhobo zeNyukliya:
Umzobo obonakalayo ngezixeko / amazwe. Ngenisa ifoto yakho kunye nesixeko / ilizwe lakho ngasemva kunye nomyalezo onje ngeBhomu +! ukuba kuyenzeka. Yithumele kuRubén ruben.sanchez.i@gmail.com. Masiqhubeke sicela inkxaso ngeefoto.
IMeditera, uLwandle loXolo
26/09 Augusta, izibuko lenyukliya kunye nokhuseleko.
I-26/9 Latiano (Brindisi) Intlanganiso malunga nogonyamelo (nge-ZOOM) phakathi kwabantu abancinci abavela e-Itali nase-Beirut (eLebhanon). I-MSGySV ihlalutya iprojekthi eza kuthi ixhase isixeko.
27/9 Isikhumbuzo somzabalazo ongenabundlobongela kwii-1980s ngokuchasene nokufakwa kweentloko zenyukliya.
I-3/10 iVenice, ukhenketho lwedike laseVenetian (ikomkhulu leMeditera lenkcubeko kodwa kunye nezibuko lenyukliya).
I-Trieste (enye izibuko lenyukliya) iya kuba nekhonsathi YOMNTU WOMNTU (ihlehlisiwe 3/7).
2 Oktobha, Usuku lwaMazwe ngaMazwe lweNkululeko
Incwadi ye-2 ye-Matshi yeHlabathi kunye neSibhengezo se-3 ye-Matshi yeHlabathi (2024). Ukuqaliswa kwamanye amazwe
Incwadana enemifanekiso: Indlela eya eluxolweni kunye nogonyamelo. Saure yoHlelo
Ukususela nge-2 ukuya kwi-4 ka-Okthobha Umnyhadala weFilimu wamanye amazwe woXolo kunye noNgcoliseko.
Amaxwebhu / iifilimu ziya kusasazwa yonke imihla kwaye suku ngalunye kuya kubakho iitafile ezi-2 ezijikeleziweyo ezenziwe ngokuhamba ngezihloko ezahlukeneyo ezinxulumene nomxholo.
Ubukho kwiinethiwekhi zentlalo buyaqiniswa: Facebook, Instagram, Twitter WhatsApp, Tik-Tok nakwiwebhusayithi yeHlabathi ngaphandle kweMfazwe kunye neHlabathi Matshi.
NgeCawa 13/9: ukuguqulelwa kwiilwimi zasekhaya (isiNgesi, isiFrentshi, isiPhuthukezi, isiTaliyane, njl.
22/9 Ulwandle lweMeditera eLa Paz. Uhambo ngesikhephe.
NgoMgqibelo 26/9: Usuku lwaMazwe ngaMazwe lokuPheliswa kwezixhobo zeNyukliya.
Umnyhadala wefilimu ka-2-4 / 10 kwi-Nonviolence
3/10 Ulwandle lweMeditera eLa Paz